असोज २ वाट मलमास सुरु । मलमासको महिना के गर्न हुने र के गर्न नहुने ? | साँचो खबर
असोज २ वाट मलमास सुरु । मलमासको महिना के गर्न हुने र के गर्न नहुने ?
मलमासलाई पुरुषोत्तम मास पनि भन्नेगरिन्छ । २ वटा औसी एकै महिना पर्ने संयोग वा अवस्थालाई नै मलमास वा अधिकमास भनिन्छ । यस वर्ष असोज २ गते सुरु भई असोज ३० गते राती १ः५३ सम्म मलमास परेको छ । असोज महिनामा मलमास पर्ने संयोग यसपाली १९ बर्ष पछि परेको हो । यस अघि २०५८ को असोज महिनामा मलमास परेको थियो । मलमास प्रत्येक तीन बर्षमा आउने गर्छ । मलमास सुर्य र चन्द्रमाको चालमा आधारित हुन्छ । मलमासलाई पुरुषोत्तम महिना पनि भनिन्छ त्यसैले यसलाई अनुशासनको महिना पनि भन्न सकिन्छ ।
यस महिना खास गरी भगवान विष्णुको पुजा गर्ने गरीन्छ । पौराणिक विधि अनुसार मलमासमा गर्ने दान, पुण्य र ईश्वर भक्तिले अरु सामान्य महिनाभन्दा बढी फल दिने विश्वास रहदैं आएको छ । यो महिनालाई आत्मसुद्धीको रुपमा लिएर पनि मानिसहरुले पौराणिक काल देखि नै ईश्वर भक्ति र दान पुण्यमा लागेर बिताउने गर्दछन् । मनको शुद्धिकालागि पनि यो महिनालाई उपयुक्त मान्न सकिन्छ । यो महिना ईश्वरको स्मरण अरु महिना भन्दा बढी गर्नु पर्दछ साथै पुर्खाहरुको स्मरण पनि गर्नु र्पदर्छ । आत्मचिन्तन् गर्ने र मानव कल्याणको दिशा तर्फ लाग्दा सकरात्मक उर्जा प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ ।
मलमासको महिनामा पहिले देखि गर्दै आएको ब्रतलाई नियमितता दिन हुन्छ तर नया“ ब्रतको सुरुवात गर्न नहुने नियम छ । मलमासको यस समयमा महादान, विवाह, व्रतबन्ध, गृहनिर्माण, गृहप्रवेश जस्ता कार्यहरु गर्नु ह“ुदैन । गर्भाधान गर्नु ह“ुदैन, पहिले नै गर्भ रहेको भए दोष लाग्नेछैन । बृहस्पति र शुक्र अस्त भएका बेला गर्न नहुने कर्महरु गर्नुहु“दैन र नया“ तिर्थ यात्रा जस्ता कार्यहरु गर्न नहुने विश्वास रहेको छ ।